Armenian Tourism: Embassy yeUS inokurudzira vashanyi kuti vangwarire "maitiro akajairwa"
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » Armenian Tourism: Embassy yeUS inokurudzira vashanyi kuti vangwarire "maitiro akajairwa"
Armenia Kupwanya Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Chirevo chemumiriri weUS muArmenia, chakakurudzira vagari vekuAmerica kuti vangwarire pavanoshanyira Armenia panguva iri kuuya yezororo reKisimusi neGore Idzva, hachina mamiriro ezvematongerwo enyika, akadaro Mutungamiriri weArmenian Tourism Federation.
Mekhak Apresyan akacherekedza izvo zvambotaurwa pamusangano wevatori venhau neMugovera.
Mumashoko ake, chirevo chakataurwa ndiyo nzira yakajairika yekudaidzwa kwekusvinura pakati pekuwedzera kwekushanya kwevashanyi pazororo reKisimusi neGore Idzva.
"Iyi ndiyo nzira yakajairika, kunyanya sezvo imwezve tsananguro yakapihwa," akadaro Apresyan. "Saka hazvingabatsiri kutaura zvakaomarara pachiitiko ichi nevakuru veArmenia."
Akasimbisa kuti, kazhinji, veruzhinji veArmenian, kusanganisira vezvenhau nevamiriri vemitemo, vanofanirwa kugadzira "mufananidzo" wekushanya wenyika.
"Armenia nevanhu veArmenian vagara vachiziviswa nemutsa wavo," Mekhak Apresyan akawedzera. "Pamusoro pezvo, masangano mazhinji epasirese anozivisa nezvedanho [repamusoro] rekuchengeteka [muArmenia]. Isu [maArmenia] takaratidza mwero wepamusoro wekuchengeteka uye nerunako kunyangwe panguva yeiyo 'velvet shanduko,' iyo yaive yakazara rugare. Izvo zvakakosha kwazvo kuti zviitiko izvi zvakafukidzwa nevekunze venhau. Zvakare, vashanyi vazhinji vekunze vakabatanawo mukufora uku, [uye] izvo zvinosimbisa zvandiri kutaura. ”